© wunna zaw
Posted by နရစိုး at 8:55 PM0comments
တိုင်ရ ဦးမယ် မေမေ...
ကြယ်ရင်ထိုး နဲ့ မိကောင်းကင်ပေါ့..
ကျနော့်ကို လက်ညှိူးငေါက်ငေါက် ထိုး..
လျှောက်လေရာ လမ်းမှာ..
လမင်းတွေ ရှုပ်ရှက်ခက်အောင် ခြွေပြတယ်လေ..
ကျနော် မမျှော်ဖြစ်တော့ဘူး..
ခနဲ့ ပြုံး တွေ စု နေတယ်..
သား ... တအား လွမ်းတယ်..။
Posted by နရစိုး at 9:22 AM0comments
ပန်းတွေ မပွင့်တဲ့ ကမ္ဘာ
ရာသီကောင်းမှာ မှ ပွင့်ချင်တဲ့ ပန်းလှလှ လေးရေ..
Posted by နရစိုး at 8:26 PM 1 comments
တစ်ချိန်က ‘ငါ့ ဘဝရဲ့ လမ်းတွေမှာ တေလေဘီလူးတို့ စောင့်လိုက စောင့်စေ’ ဆိုပြီး ဟစ်ကြွေးခဲ့ဖူးတယ်။
တစ်ချိန်က နှလုံးသားမှာ နှင်းဆီဆူးတွေ စိုက်ပျိုးဖို့… စေတန်ပေးတဲ့ လက်ဆောင်
လှိုင်းတမော့မော့နဲ့ မြစ်ကမ်းကိုလဲ ဦးခိုက်ဖူးတယ်။
လက်ရာတွေ အကြိမ်ကြိမ်ညံ့ခဲ့လို့ ကမ္ဘာဦးနေ့ ရဲ့ ပထမဆုံး ဆည်းဆာရောင်နဲ့ အတူ ငါ့အလွမ်းတွေ သမိုင်းဝင်ခဲ့သေးတယ်။
နင် စေခိုင်းမှ ပြောခွင့်ရှိမယ်ဆိုရင်တော့ ငါဟာ ‘အ’ နေတဲ့ ကောင်ပေါ့။ နင်လျှောက်လမ်းခဲ့တဲ့ မြေနီလမ်းတွေ …၊ နင် လွမ်းတတ်တယ်ဆိုတဲ့ အလင်းနွေးနွေး အိပ်မက်တွေ .. တစ်နေ့မှမေ့လို့ မရခဲ့ဘူး။
နင်ကတော့ စာသင်ခုံထောင့်စွန်းမှာ နှင်းဆီတွေ လာလာစိုက်တဲ့ ခပ်နွမ်းနွမ်း ကျောင်းသားလေးကို မေ့နေပြီလားလို့ နှုတ်ခမ်းကိုက်ပြီး စဉ်းစားဖူးတယ်။
Posted by နရစိုး at 7:16 PM0comments
Posted by နရစိုး at 10:41 PM0comments
Pencil Portriat - 3
Title > wah lwin phoo
Type > human face
Title > akari mg
Posted by နရစိုး at 10:23 PM0comments
Pencil Portriat - 2
Title > Japanese Cover
Type > cartoon
Title > khine thaw hnin
Posted by နရစိုး at 9:59 PM0comments
Pencil Portriat - 1
Title > Wallpaper
Title > Initial
မယ်မယ်ရရ လုပ်စရာမရှိတော့လည်း အတွေးများက ဟိုတစ်စဒီတစ်စ သူ့ခေါင်းထဲ ၀င်လာသည်။ သူသာ မဟာဇနက အလောင်းတော်ဖြစ်ခဲ့လျှင် ရေထဲ ဒိုင်ပင်ထိုးဝင်ကာ ဦးတည်ရာ တစ်နေရာသို့ မနားတမ်း ရောက်အောင် ကူးမိမည်လော။ မသေချာ။ သူ့ထံ ၌ ဇွဲမရှိ။ တစ်ကိုယ်လုံးသုတ်လိမ်းရန် နှင့် အစာခံအောင် စားသွားရန် ထောပတ် မရှိ။ လက်ပန်းကျနေချိန်တွင်ပင် လာကယ်ရန် မေခလာ နတ်သမီးမရှိ။ ထို့ကြောင့် ရှိနေသည့် သူ့လှေကလေးဖြင့်ပင် အရပ်မျက်နှာ တစ်ခုသို့ (ကမ်းတွေ့လို တွေ့ငြား) လှော်ခတ် ခဲ့ရသည်။ နေရောင်က ခုချိန်ထိ ပူပြင်းတောက်လောင် ကောင်းတုန်းရယ်။ မိုးမယ့်ကာမယ့် အရာ မရှိတော့ ပင်လယ်ပြင်ကလည်း တံလျှက်ရောင် တဖြန်းဖြန်းနဲ့ ကျိန်းစပ်နေသည်။ သူလှေကလေးနှင့် သူ လည်း အတော်ပင် စုတ်ပြတ်နေပြီ ဖြစ်သည်။
အခုလို ကျတော့လည်း ဒီ ကုန်တင်သင်္ဘောနဲ့ အစတည်းက မလိုက်ခဲ့ရင် ကောင်းသားဟု သူ နောင်တရနေမိသည်။ ကိုယ်ပိုင်မြေ တစ်ကွက်ဝယ်ရန် ပိုက်ဆံလို သောကြောင့် သူ ဒီသင်္ဘောနှင့် လိုက်ခဲ့ရခြင်း ဖြစ်သည်။ ခုတော့ သူပိုင်သည့် (ပိုင်သည်ဟု ဆိုနိုင်သည့်) မြေက လှေငယ်လေး တစ်စင်း စာရယ်။ ကမ်းမတွေ့လို့ ပင်လယ်ထဲ၌ပင် သူသေသွားလျှင်လည်း သူ့ကို မြှပ်စရာ မြေနေရာ တစ်ပေပတ်လည် မျှပင်မလို။ ကဲ….. လောကရယ် တစ်ကိုယ်လုံး လောင်ကျွမ်း တောက်လောင် ပြနေခဲ့ရင်တောင်မှ ရလဒ်က ပြာမှုန်တွေတဲ့လား…။ ဖြစ်နိုင်လျှင် ဘ၀ကို အဲ့ဒီကနေ စချင်သည်။ နောက်ထပ် လောင်ကျွမ်းစရာ မလိုတော့။
အမှောင်က ညနေပျိုကို လောကကြီးအား လက်ဆောင်ပေးလိုက်သည်။ အလားကားရတော့ လောကကြီးကလည်း ခပ်တည်တည်နှင့် လက်ခံလိုက်သည်။ ဒါကပဲ မုန်တိုင်းရဲ့ အစ ဖြစ်ခဲ့တော့တယ်။ ပင်လယ်က သူနှင့် သူ့လှေကလေးကို စတင် ကျီစားပြီ။ လေပြည်က တဖြည်းဖြည်းနှင့် ပြင်းထန်လာပြီး ကောင်းကင်က အတင်းကြီး မှောင်ညစ်ပြနေသည်။ မာယာ…………………..။ သူနှင့်ရင်နှီးနေသော စကားလုံး။ အ၀တ်အစား၏မာယာ၊ အလှတရား၏ မာယာ၊ ၀က်သားတုတ်ထိုး၏ မာယာ၊ ချစ်သူ၏ မာယာ၊ အပြုံး၏ မာယာ၊ နပိုလီယန်၏ စစ်ပရိယာယ်မာယာ၊ လောက၏ မာယာ၊ အရာအားလုံး၌ ရှိသော မာယာ။ မာယာ၏ မာယာ။ ယခု… သူ့ကို ပင်လယ်ပြင်က…မာယာပြပြီ။ ကချေသည်က. အကကွက် တွေကို တစ်ကွက်ခြင်း ထုတ်ပြသလိုမျိုး…. မာယာတွေကို လွှာချပြနေသည်။ လေပြင်းက ငြိမ်သွားပြန်ပြီ။ အမှောင်ကတော့ နောက်ထပ်ပြန်မလင်း နိုင်တော့သော အခြေအနေ။ မုန်တိုင်းကျတော့မှာလား…။ သူ့စိတ်တွေ ခြောက်ခြားသွားသည်။ ယိုင်နဲ့နေသော ခန္ဓာကိုယ်ကို တည့်မတ်ရင်း သူ့ကိုယ်သူ အားတင်းကြည့်သည်။ မရ…. ။ သူ အနည်းငယ်စိတ်ပျက်သွားသည်။ ဒီတစ်ခေါက် မုန်တိုင်းကျလျှင် သူတော့ သေပြီဟုထင်နေသည် (သို့မဟုတ်) သိနေသည်။
ရုတ်တရက် သူ့မြင်ကွင်းထဲမှာ သင်္ဘောတစ်စင်း….။ ဟုတ်တယ် ..အဲ့ဒါသင်္ဘော ပဲ။ သူ့အပျော်တွေ အရောင်လက်သွားသည်။ လှော်တက်ကို ကောက်မ လိုက်ပြီး ထိုသင်္ဘောဆီသို သူ စတင်လှော်ခတ်လိုက်သည်။ မျှော်လင့်ချက် များကတော့ သူ့ရင်နှင့် အပြည့်။ သင်္ဘောကလည်း သူ့ဆီ လာနေပုံရသည်။ အားတင်းပြီး ခပ်မြန်မြန် လှော်လိုက်သည်။ မုန်တိုင်းကလည်း သူ့ကို စောင့်မည်မထင်။ သူ လှော်နေသည်။ သူ့လှေ သေးသေးလေး ၏ ဘေးပတ်ပတ်လည်မှာ ကြီးမားသော လှိုင်းဂယက်များ အဆက်မပြတ် ထွက်နေသည် အထိ လှော်သည်။ စိတ်လိုတိုင်းတော့ ခရီးမရောက်။ သင်္ဘောက သူ့လှေကလေးကို မြင်သွားပြီး ကယ်တင်ဖို့ သူ့ဖက်ကို ဦးလှည့်လိုက်သည်။ ဟုတ်သည် .. တကယ်လာနေပြီ။ ထို့အတူ ပင်လယ်ကလည်း တပ်မဟာ ပေါင်းများစွာနဲ့ သူ့ဆီလာနေပြီ။ သူစိတ်တွေလည်းအားမလို အားမရ ဖြစ်နေသည်။ ရွှီ.. ဆိုပြီး ခရာ မှုတ်လိုက်လို့ တာထွက်လာတဲ့ အပြေးသမားတွေလိုမျိုး လေရာ . မိုးရော ရွာကျလာသည်။ ကောင်းကင် ကလည်း အနက်ရောင် ပြောင်းသွားလေပြီ။
စပြီ။ သူနှင့် ပင်လယ် တို့ရဲ့ တိုက်ပွဲ….။
သူ့ ၀ိညာဉ်ကလည်း ဘယ်လို မုန်တိုင်းလာလာ ရိုက်ခွဲ ပစ်ဖို့ အဆင်သင့်။ သူ့ လှေကလေးနှင့် သင်္ဘောကြီးကလည်း အတော်ပင် နီးနေပြီ။ ရုတ်ချည်းဆိုသလို ပင်လယ်က သူ့ကိုယ်သူ မွှေ့ပစ်လိုက်သည်။ ၀ဲဂယက် တစ်ခု ဖြစ်ပေါ်လာပြီး သူ့လှေကလေး ရမ်းခါသွားသည်။ အားစိုက်ပြီး သူလှော်သည်။ တိုက်ပွဲမှာ သူရဲကောင်းက သူ့ဓါးကို မြဲနေအောင် ဆုပ်ကိုင်ထား သလိုပါပဲ… လက်ထဲက လှော်တက်ကလည်း သူ လက်လွှဲရာ လိုက်ပါနေတယ်။ လေထုဖိအား အရမ်းပြင်းလာသောကြောင့် သူ့နားတွေလဲ အူနေသည်။ တဖြည်းဖြည်းနှင့် ဘာသံမှ ကို မကြားနိုင်လောက်တော့တဲ့ အထိ သူ့ခေါင်းတွေ မူးရီနေသည်။ ခဏကြာတော့ ၀ဲဂယက်တစ်ခု ကလွဲပြီး သူ့လှေကလေးနှင့် သင်္ဘောကြီး ကြားမှာ ဘာမှမရှိတော့တဲ့ အခြေအနေကို ရောက်ရှိသွားသည်။ သူ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
Posted by နရစိုး at 8:38 PM0comments
၀ါဒိက္ခရာ (ခေါ်) ၀ီစကီ နှင့် ဇာဏိယာ (ခေါ်) ရမ် တို့ကို အလွန့်အကြွံ သောက်သုံးပါက အရက်နာကျသော ဒဏ်ကို ခံစားရမည် ဖြစ်သည်။ သို့သော် သုရာမေရယကံ (ခေါ်) အရက် သေစာ မူးယစ်သောက်စား ကျူးလွန်သောကံကို ဖောက်ပြန်နေကျဖြစ်သော မဇ္ဇပ (ခေါ်) အရက်သမားများက ထိုအရက်နာကျသော ဒဏ်ကို မမှုတော့ပေ။
အရက်သောက်သော သူများထဲတွင် ပုဏ္ဏသိရောမတ္တက (ခေါ်) ထိပ်ပြောင်၍ ဥဂ္ဂနာသိက (ခေါ်) နှာခေါင်းကြီးသော ၀ုဒ္ဓါဝိဟာဝိတ (ခေါ်) လူပျိုကြီးများလဲ ပါဝင်သည်။ ၎င်းတို့သည် ဗာလဘာဝတောဒါသ (ခေါ်) ငယ်ချစ် ကြောင့် ပေမဿု (ခေါ်) မျက်ရည်များ ကျကာ အသည်းကွဲဒဏ်ကို မခံနိုင်သဖြင့် သုရာ (ခေါ်) အရက်သေစာ ကို သောက်လေ့ရှိသည် ဟုဆို၏။ သို့သော် မေ့ကား မမေ့နိုင်ချေ။
မက္ခိတာ (ခေါ်) ယင်ကောင်သည် ဂုတ္တဓရ (ခေါ်) စုံထောက်တို့၏ ကိုင်စွဲနေကျ ဖြစ်သော ပရိက္ကာမ (ခေါ်) ခြောက်လုံးပြူး ဖြင့် ပစ်လျှင် ပင် မထိ။ ထိုခြောက်လုံးပြူးသည် အရက်မသောက်။ ယင်ကောင်သည်လည်း မူးယစ် မနေ။
အန္နပါနေသု (ခေါ်) ထမင်းအဖျော်ကောင်း စားသောက်သော အခါ၌ ပိယံ (ခေါ်) ချစ်သောသူကို ဣစ္ဆန္တိ (ခေါ်) အလိုရှိကြကုန်၏။ မူးယစ် နေချိန်တွင် ပြောသည့် လွမ်းတယ် ဟူသော စကားနှင့် ဘာကွာသနည်း။ ထိုခဏ၌ ကာမိနီ (ခေါ်) ချစ်ဖွယ်ကောင်းသော မိန်းကလေး ကို သတိတရ အလိုရှိနေပြီလား။ လောက၌ ဥာဏ်နှင့်ယှဉ်၍ လွမ်းဆွေးခြင်းသည် အဆိုးဆုံးဖြစ်သည်။ မူးယစ်နေချိန်၌ ဆင်ခြင် ဥာဏ် နည်းပါး၏။ ထို့ကြောင့် အရက်တစ်ခွက်သည် အနည်းဆုံး လွမ်းသည့်ဒဏ်ကိုတော့ အဆိုးဆုံး မဖြစ်စေနိုင်ပေ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဘာမှမဖြစ်နဲ့ဟု ရှေးလူကြီးများက ဆုံးမဖူးသည်။ ထို့ကြောင့် ဘာမှ မဖြစ်။ ဘာမှ မရှိ။ ထိုအခါ ကမ္ဘာကြီးသည် တစ်ကောင်တည်း ကြောင်တောင်တောင်ဖြစ်သွား၏။ ဘာလုပ်ရမှန်း မသိဖြစ်နေသော ကမ္ဘာကြီးကို ဘယ်သူက အရက်သွားတိုက်လိုက်သည်မသိ။ လူမှန်းသူမှန်း မသိ မူးနေတာ ခုချိန်ထိပင်။ ဆက်၍ဆက်၍ သူ့အပေါင်းအဖော်များ ဖြစ်သော ဂြိုလ်ကိုးလုံး၊ ကြယ်များ၊ လများ ကလည်း အားကျပြီး သုရာ (ခေါ်) အရက်ကို လိုက်သောက်ကုန်ကြ၏။ အားလုံးမူးကုန်ကာ ချာချာလည် သွားကြသည်။ ဘာမှန်းညာမှန်းမသိသော လူများက ရူပဗေဒ ပညာရှင် ဟု သူတို့ကိုယ်သူတို့ နာမ်စားသုံးကာ ထိုအခြင်းအရာများ လည်နေရခြင်း အကြောင်းကို စုံစမ်း ဖော်ထုတ်ကြကုန်၏။ ရှာမတွေ့ သောအခါ စိတ်ညစ်ညစ် နှင့် သုရာ (ခေါ်) အရက် ကို သောက်ကြပြန်လေသည်။ ထိုမှတဆင့် သောက်စား မူးယစ်ခဲ့ကြရာ ကမ္ဘာမြေကြီး ၏ အဆင်တန်ဆာ ဖြစ်သော လူသားအားလုံးတို့သည် သုရာ (ခေါ်) အရက်ကို ကြိုက်မှန်းမသိ ကြိုက်လာကြတော့သည်။
တစ်ချို့ အရက်သမား များသည် အရက်သောက်ပြီး ပါဏာတိပါတာကံ (ခေါ်) သူတပါးအသက် သတ်ခြင်း ကံကို ကျူးလွန်ကြ၏။ တစ်ချို့ကလည်း ကာမေသုကံ (ခေါ်) သူတပါး သားမယား အားပြစ်မှား ခြင်းကံကို ကျူးလွန်ကြ၏။ တစ်ချို့ကလည်း အကုန်လုံး ကျူးလွန်ကြ၏။ ကြာသပတေးနေ့ဖွားဖြစ်သော ကဿပ ဘုရားရှင် လက်ထက်တော်၌ ဗျာဒိတ်တော်ရခဲ့ သော .သောကြာနေ့ဖွား ဂေါတမ ဘုရားရှင်သည် ဘုရားအဖြစ်သို့ မရောက်ရှိခင် ကာလ သုရာ (ခေါ်) အရက် ကို လယ်လုပ်သား ဘ၀၌ သောက်စားခဲ့ဖူးသော်လည်း မုသာဝါဒ ကံ (ခေါ်) လိမ်ညာ ပြောဆို ခြင်းကံကို တစ်ခါမျှပင် ကျူးလွန်ခဲ့ခြင်းမရှိဟု တရားစာအုပ်များ၌ တွေ့ရသည်။
သေချာတာက တော့ ကဗျာဆရာများ အရက်သောက်လျှင် အရက်သမားဟု မခေါ်။ ယမကာ လုလင်ဟုသာ ခေါ်သည်။ ဤသည်မှာ အမ္မတသာဂရဘေသဇ္ဇ ကျမ်းကြီးအလို အရသာ ဖြစ်တော့သည်။
Posted by နရစိုး at 8:21 PM0comments
ဒို ရေ မီ ဖါ ဆို လာ တီ ဒို … ပန်းပွင့်တွေရဲ့ ရစ်သမ်ဟာ သရဏဂုံ သုံးပါးဖြစ်တယ်။
ကမ္ဘာမကြေ မြန်မာပြေ ဖြစ်တယ်။
မင်္ဂလာပါ ဆရာမ ဖြစ်တယ်။ ရှိပါတယ်ခင်ဗျ ဖြစ်တယ်။
စာအံသံတွေ နဲ့ ….. အဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကို ‘ကျောင်းတော်’ လို့ ခေါ်တယ်။
Posted by နရစိုး at 7:50 PM0comments
Posted by နရစိုး at 7:50 PM2comments
Posted by နရစိုး at 7:38 PM2comments
Posted by နရစိုး at 7:28 PM0comments
အနုပညာနဲ့ ပက်သတ်တဲ့ လှုပ်ရှားမှု တွေပါ။
အလင်းငွေ့ငွေ့ နှင်းတပွေ့ပွေ့ နှင့် ငါသည်.. ဆောင်းဦးလူသား ဖြစ်သည်။
Copyright © 2009 The Art of Nat - Design by Dante Araujo - Powered by Blogger